Sawirro+Codad: Wilaayada Islaamiga Galguduud oo qabatay barnaamij lagu Taageerayo Weerarkii Lamu.
Wednesday June 26, 2019 - 09:19:10 in Wararka by
Waaxda Socdaalka Dibada ee Dowladda Mareykanka ayaa markale soo saartay digniino loo jeedinayo dadka American-ka kuwaasi oo ku aaddan khataro ay kala kulmi karaan haddii ay usafraan dalal ku yaala Qaaradda Africa.
Warbixinta cusub ee kasoo baxday Mareykanka ayaa lagu sheegay in halis badan ay kajirto (16) Lix Iyo Toban dal oo Caalamka ku yaalla sigaar ah waxaa loo Calaamadeeyay Lix Wadan oo ka tirsan Qaaradda Africa kuwas oo ay ka mid yihiin Liibiya, Suudaan, Maali, Suudaanta Konfureed, Afrikada Dhexe iyo dalka Soomaaliya.
Digniinta kasoo baxday Waaxda Arrimaha Dibada Mareykanka ayaa lagu sheegay in Muwaadiinta heysta dhalashada Mareykanka ay la kulmi karaan weeraro kadhaca deegaanada ay ku suganyihiin ama goobaha dalxiiska, Sidoo kale waxay xustay in ay suura galtahay in Afduub loogeysto.
Gudaha Soomaaliya waxaa ku sugan boqolaal askari American ah kuwaas oo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ku xasuuqa shacabka Soomaaliyeed, Xarakada Al Shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ku qaadday ciidamada Mareykanka waxaana weeraradaas lagu dilay ugu yaraan 2 askari sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca Mareykanka.
Mareykanka oo dalkiisa ka Eryaya 21 Askar Sacuudiyaan ah.
Mareykanka iyo Iiraan oo sheegay in ay diyaar u yihiin Wadahadallo lagu joojinayo coladda udhaxaysa.